Zimbabwe-Cuba Teacher Education Programme improved quality of Education in Zimbabwe - Veldfire News Express
Education is an important tool for the development of a nation. A quality education system will in turn produce an educated population which can contribute towards building a better society
The relationship between Cuba and Zimbabwe stemmed from the colonial period where Cuba supported the liberation efforts of the freedom fighters. This relationship was further strengthened once Zimbabwe gained independence as Cuba took not only to training Zimbabwean teachers but also doctors to assist the education and health services in the country.
“President Mugabe then asked Cde Castro if he could send some of his people to address the shortage of teachers in Zimbabwe, particularly in the Science and Mathematics subjects at secondary level,” he said.“The programme started when President Mugabe visited Cuba in 1985. He toured the country and was taken to the ‘island of youth’.
There he visited schools belonging to many nationalities, including Mozambique, Ghana and Angola where they were receiving training in primary and secondary education. Mr Pesanai said Zimbabwe was rebuilding the education system in the post-independence period and this was an opportunity for Zimbabweans to receive quality training abroad.